ပန်ဒိုရာ: RED ALERT
Posted by pandora at 11:57 AM
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်တဲ့ အခါမှာ ဓါးပြတွေထဲ အလျှူငွေ မထဲ့ ဖို့ ဘဲ လိုတယ်၊ တကယ်ခံစားနေရတဲ့ ဒုက်ခသည်တွေဆီ ရောက်ဖို့ လိုပါတယ်
that's right!..I agree with you "j". we want to donate the people who need the help actually.
နအဖက လက်မခံဘူးဆိုတာက အပြိးအပြတ်မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။ အခုသူတို့လုပ်ချင်တဲ့ဟာ လုပ်ခွင့်ရသွားပြီ ဆိုတော့ ၀င်ခွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အခုကာလက အလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်နေတော့ မနက်ဖြန် စောင့်ကြည့်ရမှာဘဲ။
ကျနော်ဆိုလိုတာက မေ ၁၀ရက်နေကို ပြောတာပါ။
ဒါပေမယ့် တကယ်တမ်း အကူအညီပေးမယ်ဆိုရင်တော့ တကယ် ဒုက္ခ တွေ့သူတွေ တိုက်ရိုက်ရရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။
အခု ထိုင်းကနေပြီး ပို့နေတာတွေ မြင်ရတာ ကျနော်တော့ စိတ်မချဘူး။ နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်လေ၊ အကူအညီများများရလေ၊ နအဖက သိမ်းလေလေ ဖြစ်မှာကိုပါ။
I am the senior editor of Orato.com and we are trying to get the word out from INSIDE Myanmar. I am having trouble findingablog that is not censored. Can you please e-mail me if you can help?